News - elu okpomọkụ bọl valvụ
Kedu otu esi ahọrọ ihe valvụ n'okpuru ọnọdụ okpomọkụ dị elu
Na sistemụ na-ebugharị mmiri, valvụ bụ ihe nchịkwa dị mkpa, nke nwere ọrụ nke iwu, ntụgharị, mgbochi ịghaghachi azụ, ịkpụ, na shunt. A na-eji valvụ eme ihe n'ọtụtụ ebe na ụlọ ọrụ mmepụta ihe na obodo. Igwe okpomọkụ dị elu bụ ụdị a na-ejikarị na valves. Njirimara ya dị iche iche dị ka ndị a: arụmọrụ arụmọrụ dị mma, enwere ike ịme miri emi; ezigbo ịgbado ọkụ; ezigbo absorption nke mmetụta, o siri ike imebi ya site na ime ihe ike; Iwe iwe na-adịkarị obere na na. Enwere ụdị dị iche iche dị elu. Ihe a na-ahụkarị bụ nnukwu okpomọkụurukurubụba valves, elu-okpomọkụ bọl valvụ, nzacha okpomoku di elu, na okpomoku di elu ọnụ ụzọ ámá.
Igwe ọkụ dị elu na-agụnye valvụ ọnụ ụzọ ámá dị elu, ọnụ ụzọ na-emechi ihe, okpomọkụ na-enyocha valvụ, valvụ bọọlụ dị elu, akwa urukurubụba valvụ, akwa agịga valvụ, akwa okpomọkụ trotul valves, na nrụgide dị elu na-ebelata valves. N'ime ha, ndị a na-ejikarị eme ihe bụ valvụ ọnụ ụzọ ámá, valvụ ụwa, valvụ ego, valvụ bọl na urukurubụba
High okpomọkụ na-arụ ọrụ ọnọdụ tumadi na-agụnye sub-elu okpomọkụ, elu okpomọkụ Ⅰ, elu okpomọkụ Ⅱ, elu okpomọkụ Ⅲ, elu okpomọkụ Ⅳ, na elu okpomọkụ Ⅴ, nke a ga-ẹkenam iche iche n'okpuru.
1. Sub-elu okpomọkụ
Sub-okpomọkụ dị elu pụtara na ọrụ ọrụ nke valvụ ahụ dị na mpaghara 325 ～425 ℃. Ọ bụrụ na ọkara bụ mmiri na uzuoku, WCB, WCC, A105, WC6 na WC9 na-ejikarị. Ọ bụrụ na ọkara ahụ bụ sọlfọ nke nwere sọlfọ, a na-ejikarị C5, CF8, CF3, CF8M, CF3M, wdg, nke na-eguzogide ọgwụ na sulfide corrosion. A na-ejikarị ha eme ihe na ikuku na nrụgide na-ebelata ngwaọrụ na ngwa coking na-egbu oge na refineries. N'oge a, a naghị eji valvụ nke CF8, CF8M, CF3 na CF3M mee ihe maka mmebi mmebi nke ngwọta acid, mana a na-eji ya maka sọlfọ nwere ngwaahịa mmanụ na pipeline mmanụ na gas. N'ọnọdụ a, ogo kachasị ọrụ nke CF8, CF8M, CF3 na CF3M bụ 450 Celsius C.
2. Akwa okpomọkụ Ⅰ
Mgbe ọrụ okpomọkụ nke valvụ ahụ bụ 425 ～550 ℃, ọ bụ klas nke dị elu I (nke a na-akpọ PI class). Isi ihe nke PI ọkwa valvụ bụ "elu okpomọkụ Ⅰ ọkwa ọkara carbon chromium nickel obere ụwa titanium elu mma okpomọkụ na-eguzogide ígwè" na CF8 dị ka isi udi na ASTMA351 ọkọlọtọ. N'ihi na ọkwa PI bụ aha pụrụ iche, a na-etinye echiche nke igwe anaghị agba nchara (P) ebe a. Yabụ, ọ bụrụ na onye na-arụ ọrụ bụ mmiri ma ọ bụ uzuoku, agbanyeghị na igwe nwere nnukwu okpomọkụ WC6 (t≤540 ℃) ma ọ bụ WC9 (t≤570 ℃) nwekwara ike iji ya, ebe sọlfọ nwere mmanụ ngwaahịa nwekwara ike iji igwe dị elu dị elu. C5 (ZG1Cr5Mo), mana enweghị ike ịkpọ ha PI-klas ebe a.
3. Akwa okpomọkụ II
Na-arụ ọrụ okpomọkụ nke valvụ bụ 550 ～650 ℃, a na-ekewa ya dị ka nnukwu okpomọkụ Ⅱ (nke a na-akpọ P Ⅱ). PⅡ klas elu okpomọkụ valvụ na-bụ-eji na mmanụ mmanụ catalytic cracking ngwaọrụ nke refinery. O nwere akwa mkpuchi na-eguzogide ọgwụ na-eguzogide ọgwụ eji eme ihe na ntụgharị atọ na akụkụ ndị ọzọ. Isi ihe nke PⅡ ọkwa valvụ bụ "elu okpomọkụ Ⅱ ọkwa ọkara carbon chromium nickel obere ụwa titanium tantalum mesikwuru okpomọkụ na-eguzogide ígwè" na CF8 dị ka ihe bụ isi udi na ASTMA351 ọkọlọtọ.
4. Uzo elu III
Ọnọdụ na-arụ ọrụ nke valvụ ahụ bụ 650 ～730 ℃, a na-ekewa ya dị ka nnukwu okpomọkụ III (nke a na-akpọ PⅢ). PⅢ klas elu okpomọkụ valves na-bụ-eji na nnukwu arọ mmanụ catalytic cracking nkeji ke refineries. Isi ihe nke valvụ PⅢ klaasị dị elu bụ CF8M dabere na ASTMA351.
5.High okpomọkụ Ⅳ
Ọnọdụ na-arụ ọrụ nke valvụ ahụ bụ 730 ～816 ℃, a na-egosiputa ya dị ka nnukwu okpomọkụ IV (nke a na-akpọ PIV maka obere). Oke dị elu nke okpomọkụ na-arụ ọrụ nke valvụ PIV bụ 816 ℃, n'ihi na ọnọdụ kachasị elu nke ọkọlọtọ ASMEB16134 nrụpụta-ọnọdụ okpomọkụ ahọpụtara maka imepụta valvụ bụ 816 ℃ (1500υ). Na mgbakwunye, mgbe ọrụ ọrụ karịrị 816 Celsius C, nchara ahụ dị nso ịbanye mpaghara na-eme ihe na-adịghị mma. N'oge a, ọla ahụ dị na mpaghara nrụrụ plastik, na ọla ahụ nwere ezigbo plasticity, ọ na-esikwa ike iguzogide nrụgide na-arụ ọrụ dị elu na mmetụta dị ike ma gbochie ya ka ọ gbanwee. Isi ihe nke P Ⅳ valvụ bụ CF8M na ọkọlọtọ ASTMA351 dị ka ihe bụ isi udi "elu okpomọkụ Ⅳ ọkara carbon chromium nickel molybdenum obere ụwa titanium tantalum mesikwuru igwe na-eguzogide okpomọkụ". CK-20 na ASTMA182 ọkọlọtọ F310 (gụnyere ọdịnaya C nke -01050%) na F310H igwe anaghị agba nchara.
6, elu okpomọkụ Ⅴ
Ọnọdụ okpomọkụ nke valvụ ahụ dị elu karịa 816 ℃, nke a na-akpọ PⅤ, PⅤ valvụ ọkụ dị elu (maka valvụ na-emechi, ọ bụghị ịhazi valvụ urukurubụba) ga-enwerịrị ụzọ pụrụ iche, dị ka mkpuchi mkpuchi mkpuchi ma ọ bụ mmiri ma ọ bụ gas hụ na arụmọrụ nkịtị nke valvụ ahụ. Ya mere, akọwaghị oke njedebe ọrụ okpomọkụ nke P high klaasị valvụ dị elu dị elu, n'ihi na ọnọdụ ọrụ ọrụ nke valvụ na-achịkwa abụghị naanị ihe ejiri ya kpebie, mana site na usoro imepụta pụrụ iche, na ụkpụrụ bụ isi nke usoro imepụta. bụ otu ihe. PⅤ ọkwa dị elu nke nwere ike ịhọrọ ihe ezi uche dị na ya nke nwere ike izute valvụ ahụ dị ka onye na-arụ ọrụ na nrụgide ọrụ ya na ụzọ imepụta pụrụ iche. Na PⅤ klas dị elu dị elu, na-abụkarị flapper ma ọ bụ urukurubụba valvụ nke flue flapper valvụ ma ọ bụ urukurubụba valvụ na-ahọrọkarị site HK-30 na HK-40 alloys-okpomọkụ dị elu na ọkọlọtọ ASTMA297. Corrosion na-eguzogide ọgwụ, mana enweghi ike iguzogide ujo na nnukwu nrụgide.
Post oge: Jun-21-2021